Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na mgbanwe nke usoro na France
Mgbe ịchọrọ ịbanye na France, e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi enweta ikikere ikikere ụgbọ ala. Ndị mba ọzọ ga - achọpụta nhọrọ kachasị mma maka ọnọdụ onwe ha, na maka ọrụ ha.
Ekekọrịta ikike ịkwọ ụgbọala mba ọzọ maka ikike France
Ma ị bụ nwa amaala nke Europe ma ọ bụ na ị bụ, ị nwere ike ịgbanwe ikike ịkwọ ụgbọala gị maka aha French. Enwere ike ime nke a n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ọnọdụ nke mgbanwe nke ikike ịkwọ ụgbọala
Mba ndị mba ọzọ bụ ndị biri na France n'oge na-adịbeghị anya na ndị nwere ikike ịnya ụgbọ ala na-abụghị nke European nwere ikike ịgbanwe ya maka ikike France. Nke a na-enye ha ohere ịkwaga na ịkwọ ụgbọala n'ụzọ iwu na ala French.
A ga-ario arịrịọ a n'ime oge a kara aka nke dabere na obodo onye bidoro ya. Iji gbanwee ikike ịnya ụgbọ ala, ị ga-:
Nwee ikike ịnya ụgbọ ala si mba na-azụ ahịa ikikere na France;
Nwee ikike ịnya ụgbọ ala ziri ezi;
Mezue ọnọdụ nke ịmara ikike ikike mba ọzọ na France.
Iji mepụta arịrịọ a, ọ dị oke mkpa ịga na mpaghara ma ọ bụ na-elekọta.
Ihe iwu a ga-agwụ iji gbanwere ikike ịkwọ ụgbọala ya
Enwere ọtụtụ akwụkwọ nkwado iji nyere na ọnọdụ nke mgbanwe mgbanwe ọkwọ ụgbọ ala mba ofesi:
Ihe akaebe nke njirimara na adreesị;
Akaebe nke iwu kwadoro ịnọ na France. O nwere ike ịbụ kaadi obibi, kaadị obibi oge, wdg. ;
Cerfa form n ° 14879 * 01 na 14948 * 01 dechara ma banye;
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mbụ;
Akaebe nke ibi na obodo amụrụ (nke mbipụta) na ụbọchị enyere. Nke a anaghị adaba ma ọ bụrụ na onye nyocha nwere naanị mba obodo;
Ntụgharị asụsụ nke ikike ịnya ụgbọ ala (nke onye ntụgharị ntụgharị ikike) mere;
Akwụkwọ nke ikike ịkwọ ụgbọala na-erughị ọnwa atọ site na mba ahụ nyere ikike. Nke a adịghị mma maka ndị gbara ọsọ ndụ na ndị na-erite uru na nchedo ụwa. Akwụkwọ a na-ekwenye na onye nyocha ahụ adịghị na ọnọdụ nke nkwusioru, iwepụ ma ọ bụ kagbuo ikike ịkwọ ụgbọala.
Mgbe a na-ezute ọnọdụ mgbanwe a, a ghaghị iziga ikikere ụgbọ ala mbụ. A na-enyezi onye na-achọ ọrụ akwụkwọ nkwado maka oke nke ọnwa asatọ. Oge imecha maka inweta akwụkwọ ikike France dịgasị iche iche.
Nkwekọrịta ikike ịkwọ ụgbọala na-enweta na Europe
Ndị nwere ikike ịkwọ ụgbọala nyere na otu n'ime mba ndị European Union ma ọ bụ mba nke so n'òtù Njikọ Akụ na Ụba Europe nwere ike ịrịọ ka ha gbanwere ikikere ụgbọ ala ha maka ikike French .
Mba ndị na-echegbu onwe ha
Nke a abụghị ihe a chọrọ n'aka, ma ọ nwere ike ịbịa mgbe onye ahụ na-egbochi ya, kagbuo, kwụsịtụrụ ma ọ bụ furu efu ihe.
Mgbanwe nke ikike ịnya ụgbọ elu nke Europe bụ naanị mgbe a na-emejọ iwu na France ma na-agụnye ime ihe n 'ikike. Ndị nwe obodo a na - echegbu onwe ha aghaghị ịbụ ndị nọ na France ma mezuo ọnọdụ nke iji ụgbọ ikike ịkwọ ụgbọala n'ókèala.
Nzọụkwụ ị ga
A ghaghi ime ngbanwe a site na mail. Ọ dị mkpa ịnye ụfọdụ akwụkwọ nlekọta ahụ:
Akaebe nke njirimara na akaebe nke adreesị;
Mpempe akwụkwọ agba agba nke ikike ịnya ụgbọ ala metụtara enyemaka nke mgbanwe ahụ;
Akaebe nke ibi na France;
Otu akwụkwọ ikike obibi;
Msdị 14879 * 01 na 14948 * 01 dechara ma banye.
Foto osise atọ;
Envelopu a kwụrụ ụgwọ na adreesị na aha onye na-achọ.
Inweta ikike nke French chọrọ oge echere agbanwe oge niile. Nke a abụghị akwụkwọ akwadoro ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala anakọtara na ngwa ahia ahụ nwere ụbọchị nnyefe ihe na-erughị ọnwa atọ.
GỤỌ Usoro ahụike French: nchedo, ụgwọ, nkwado
Gaa na ikikere ụgbọ ala na France
Iji ụgbọala na France, ọ ga-ekwe omume ịgafe nyocha nke ikikere ụgbọ ala. Ndebanye aha maka ule a chọrọ ka ọ dịkarịa ala 17 afọ. Ọ ga-ekwe omume ịga ụlọ akwụkwọ na-akwọ ụgbọala iji debanye aha, ma ọ bụ site na ngwa ngwa.
Iji gafere ikike ịnya ụgbọ ala na France, ị ga-anakọta ọtụtụ akwụkwọ:
A foto njirimara dijitalụ;
Detuo nke akwụkwọ nyocha akwụkwọ ikike;
ASSR 2 ma ọ bụ ASR (nkwupụta na nsọpụrụ ma ọ bụrụ na ọnwụ);
Akaebe nke ịkwụ ụgwọ nke ụtụ isi mpaghara (enweghị adị na-adabere na mpaghara ahụ);
Ndị mba ọzọ ga-ekwenye na oge ha ga-anọ ma ọ bụ ihe àmà nke ọnụnọ na France nke ihe na-erughị ọnwa isii ma ọ bụrụ na a gbapụrụ ha.
Nnyocha nke ikike ịkwọ ụgbọala na France na-adaba n'ime ule abụọ. Otu bu ihe omuma mgbe nke abuo di irè. Nke a bụ nyochaa Usoro Ụzọ Awara Awara nke dị n'ụdị ajụjụ, na ule nyocha.
A na-enyocha Usoro Ụzọ Awara Awara na etiti obodo French kwadoro. Ihe nlele nke ugbua ga-eduzi otu ọrụ mpaghara maka ịhazi nyocha ndị dị otú ahụ.
Ndị mba ọzọ na-enweghị ikikere ịnya ụgbọ ala nwere ike iburu ya na France. Justkwesịrị ịme ụfọdụ ọnọdụ dịka:
Nwee mpempe akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, nke nwekwara ike ịbụ asambodo ndebanye aha maka ikike ịnya ụgbọ ala;
Nwere akwụkwọ mmuta;
Bụrụ n'okpuru nlekọta nke onye na-eje ozi;
Na-agagharị na netwọk okporo ụzọ na-aga n'okporo ụzọ.
Ya mere, onye isi agha ga-abụ onye nwe ikikere ụgbọ ala maka ọ dịkarịa ala afọ ise. Ọ ghaghị ịjụ onye ahụ rịọrọ maka ụgwọ ọ bụla.
Ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-akwọ ụgbọala mgbe ị rutere France maka ogologo oge ma ọ bụ mkpụmkpụ. Ọ dị mkpa ime ihe ndị dị mkpa iji nweta ikikere ịkwọ ụgbọala gị, ma ọ bụ gbanwee ihe ị nwere megide aha French. Nke a na-enye ohere ịmegharị na iwu na mpaghara French dịka mba mba ọzọ. Nzọụkwụ a ga - adabere na ọnọdụ ya na mba ya. Oge nkwekọ maka inweta bụ mgbe ahụ dịtụ agbanwe, na usoro ndị ọzọ ma ọ bụ dị mfe.
Ihe gbasara ịkwọ ụgbọala na ịkwọ ụgbọala na France August 19th, 2018Tranquillus
gara agaDebanye ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ French
-esonụMepee akara ekwentị ma chọta onye na-ahụ maka ịntanetị na France